Shiinaha Wasarada wasakhda duritaanka duritaanka ee dibada Shiinaha | HEYA
Wasakhda cirbadaha lagu durayo gudoonka banaanka waxaa iska leh caaryada gudoomiye hoostiisa oo wasakhda duritaanka ah ee gudoonka banaanka. Marka loo eego qaababka kala duwan ee wax loo kala iibsado, Moodka Mashiinka waxaa loo qaybin karaa qaab dhaqameed iyo qaab shaqsiyeed, sida caaryada kursi caag ah ee loo yaqaan 'rattan caaryada', caaryada duritaanka kursiga bannaanka, wasakhahaasi caaga duudduuban ee laalaaban karo, Mashiinka caaryada la isku duro ee duubmaya, iwm.
Taizhou Heya Mold Co., Ltd waxay raacdaa fikradda farshaxanimada iyo daacadnimada, waxay fiiro gaar ah u leedahay qabashada iyo daaweynta faahfaahinta Qaab-dhismeedka, waxayna ku dadaaleysaa inay macaamiisha siiso alaab tayo sare leh iyo adeegyo tayo sare leh.
Waxaan ku adkeyneynaa inaan wax soo saarno wadnaha, adeegga xamaasada leh, waxaan muhiimad siineynaa abuurista xiriir kasta oo wax soo saar ah, raadso horumar leh tikniyoolajiyadda, macaamiisha ka raadi tayo, waxaanan ku siineynaa xalal wax soo saar caarya ah oo macquul ah.
Waxaan ku siin doonaa qorshe oraah oraah ah oo ku saleysan alaabadaada iyo shuruudahaaga.
Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan u abuurno mustaqbal wanaagsan.
Magaca Badeecada Wasakhda duritaanka Kuraasta banaanka
S: Waa maxay nooca habka dusha sare ee caaryada aad isticmaasho?
J: Heya Mold ayaa kuu habeyn doona baahidaada iyo caaryada gaarka ah, ka shaqeynta dusha sare ee caaryada sida: Muraayadda muraayadda; Maqaarka; Daaweynta Qalitaanka Chrome ee xudunta iyo saabka; Daaweynta kuleylka Nitride & vacuum
S: Sidee loo ansixiyaa shaybaarka?
J: Waad u iman kartaa wershedeena si toos ah loogu sameeyo imtixaanka caaryada, sidoo kale Heya Mold ayaa kuu soo diri doona shaybaarro & caaryada ordaya fiidiyowga.
S: Shuruudaha Bixinta
A: 50% T / T ka hor, iyo dheelitirka ka hor shixnad.
Hore: Caaryada Guddoomiyaha caaga
Xiga: Qaab duritaanka Kursiga